Antsirabe: navoakan’ny lehibeny ilay miaramila tratran’ny polisy nisoloky | NewsMada
Antsirabe: navoakan’ny lehibeny ilay miaramila tratran’ny polisy nisoloky
Par Taratra sur 12/01/2019
Tratran’ny polisy amin’ny asa fisolokiana ny miaramila iray kanefa navoakan’ny lehibeny avy eo. Efa mpanao io asa ratsy io izy io, ary tratra am-bodiomby mihitsy.
Miaramila iray manana grady adjidàsSefo indray no sarona tamina fisolokiana tamin’ny toeram-pifanakalozana vola amin’ny finday, tany Antsirabe. Rehefa tany amin’ny mpitandro filaminana anefa izy, fantatra fa fitoriana roa ny efa tao mikasika azy. Tonga ny lehibeny naka azy tao fa nolazaina fa tsy anjaran’ny polisy ny misahana ny fanadihadiana. Tsy nisy resaka fa afaka, noho izany, ilay miaramila io, izay miandry ny tohin’ny mety ho famotorana azy ny rehetra.
Voalaza fa efa resabe tao Antsirabe ny fomba fanaon’ity miaramila ity, ary toerana telo no efa fantatra fa nahazoany volabe. Anisan’izany ny teny akaikin’ny hotely Ravitsara-Andranomadio, ary nifampilaza ny rehetra.
Tamin’izao nahatrarana azy izao, saika haka vola 600 000 Ar tamin’ny toerana iray any Vatofotsy ity miaramila. Nilaza izy fa tsy manana finday fa mba hindrana kaonty fotsiny. Efa nahafantatra ny fomba fanaony ilay mpivarotra ka nandefa hafatra tamin’ny vadiny hiantso polisy avy hatrany. Nomen’ilay mpivarotra ilay finday izay fantatra fa asiany anarana ao anatiny, ary mody andefasany vola iny kanefa tsy misy vola mirotsaka ao fa ny an’ilay tompon’ny tsena ihany no alainy avy eo. Tonga ny polisy ary notanana avy hatrany ilay miaramila ka tsy tanteraka ny asa ratsiny. Ny olana anefa, izy io nalain’ny lehibeny io ka miandry ny tohiny ny mpanara-baovao.
Nangonin’i Yves S.